के नेपाल लगायत अविकसित राष्ट्रहरुले स्तन क्यान्सर निदानमा लगानी गर्नुपर्दछ ? – जनस्वास्थ्य खबर
किन पायो क्यान्सर उपचार गर्ने विधिले नोबेल पुरस्कार?
बिबिसी १७, असोज। शरीरको रोगप्रतिरोधी क्षमताको प्रयोग गरेर क्यान्सरको उपचारविधि पत्ता लगाएका दुई वैज्ञानिकहरूले संयुक्त रूपमा सन् २०१८ को चिकित्साशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार पाएका छन्।
अमेरिकाका प्राध्यापक जेम्स पी एलिसन र जापानका प्राध्यापक तासुकु होन्जोको अनुसन्धानले छालाको डरलाग्दो क्यान्सरको उपचारमा सम्भावनाको नयाँ बाटो खोलिदिएको थियो
नोबेल पुरस्कार प्रदान गर्ने स्वीडिश अक्याडमीले ‘इम्युन चेक्प्वाइन्ट थेरपी’ले क्यान्सरको उपचारमा क्रान्ति ल्याइदिएको बताएको छ।
विज्ञहरूका अनुसार सो उपचारविधि ‘अतिप्रभावकारी’ प्रमाणित भएको छ।
युनिभर्सटी अफ टेक्ससका प्राध्यापक एलिसन र क्योटो युनिभर्सिटीका प्राध्यापक होन्जोले ९० लाख स्वीडिश क्रोनर अर्थात् १०.१ लाख अमेरिकी डलर बराबरको पुरस्कारराशि आपसमा बाँड्नेछन्।
आफूले नोबल पुरस्कार स्वीकार गरेको जानकारी दिँदै प्राध्यापक होन्जोले सोमवार सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, “म मेरो अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिन चाहन्छु …। यो रोगप्रतिरोध उपचारविधिले पहिलेभन्दा बढी क्यान्सर रोगीहरूलाई बचाउन सकियोस् भनेर।”
प्राध्यापक एलिसनले भने, “इम्युन चेक्प्वाइन्ट ब्लकेड पद्धतिबाट सफल उपचार गरिएका क्यान्सरपीडितहरूलाई भेट्न पाउनु भावनात्मक गौरवको विषय हो। उनीहरू आधारभूत विज्ञानको शक्ति, हाम्रो सिक्ने चाहना र विभिन्न कुराहरूले कसरी काम गर्छन् भन्ने बुझ्नका लागि जीवन्त उदाहरण हुन्।”
उपचारै नहुनेको उपचार
शरीरमा भएको रोगप्रतिरोधक्षमताले हामीलाई रोग लाग्नबाट जोगाउँछ। बाह्य जीवाणु वा कोषलाई आक्रमण गर्दा आफ्नै तन्तुलाई जोगाउने नैसर्गिक गुण पनि हाम्रो प्रतिरोधपद्धतिमा हुन्छ।
केही क्यान्सरहरूले त्यही गुणको फाइदा लिन्छन् र प्रतिरोधप्रणालीलाई झुक्याइदिन्छन्।
एलिसन र होन्जोले ट्युमरका कोषहरूलाई आक्रमण गर्ने गुण भएका विशेष कोषहरू प्रतिरोधप्रणालीबाट निकाल्ने उपाय पत्ता लगाएका हुन्।
ती विशेष कोषहरू उत्पादन हुन नदिने प्रोटिनलाई अवरोध गर्ने उपाय पत्ता लागेपछि नयाँ औषधिहरूको विकास सम्भव भयो। यसले गम्भीर चरणमा रहेको क्यान्सर र पहिला उपचार गर्न नसकिने क्यान्सरको पनि उपचार हुने आशा बढेको छ।
संयुक्त अधिराज्यको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा एनएचएसले ‘इम्युन चेक्प्वाइन्ट थेरपी’ भनिने सो उपचारविधि मेलनोमा भनिने गम्भीर खालको छालाको क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग गर्छ।
यो विधिले सबैमा काम गर्दैन। तर केही बिरामीमा भने शरीरभरि फैलिएको ट्युमर निर्मूल गरिदिएर अविश्वसनीय रूपमा काम गरेको छ।
यस्तो उपलब्धि यसअघि क्यान्सर भएका बिरामीमा पहिला कहिल्यै देखिएको थिएन।
चिकित्सकहरूले अन्तिम चरणको फोक्सोको क्यान्सर भएका बिरामीको उपचारमा पनि यो विधि प्रयोग गरेका छन्।
क्यान्सर रिसर्च यूकेका प्राध्यापक चार्ल्स स्यान्टनले नोबेल विजेता वैज्ञानिकहरूलाई बधाई दिँदै भने, “यो अभूतपूर्व कामका लागि धन्यवाद। हाम्रो आफ्नै रोगप्रतिरोध प्रणालीको क्यान्सर रोक्ने नैसर्गिक शक्ति पत्ता लागेको छ र बिरामीहरूको जीवन बचाउने उपचारविधि बनेको छ।”
“अन्तिम चरणका मेलनोमा एवम् फोक्सो र मिर्गौला आदिको क्यान्सरमा प्रतिरोधक्षमतालाई बढाउने औषधिले निरुपाय भएका धेरै बिरामीहरूप्रतिको दृष्टिकोण फेरिदिएको छ।”
थप अनुसन्धानले रोगप्रतिरोध प्रणाली उपयोग गर्ने उपचारविधिमा नयाँ अवसर देखिने उनको विश्वास छ।
प्रत्येक वर्ष विभिन्न विधामा दिइने नोबल पुरस्कारमध्ये चिकित्साशास्त्रतर्फका विजेताको नाम पहिला घोषणा गरिन्छ।
एउटा यौनदुर्व्यवहारको घटना सार्वजनिक भएपछि यो वर्ष साहित्यतर्फ नोबेल पुरस्कार दिइनेछैन।
चिकित्साशास्त्रतर्फ असअघि नोबल पुरस्कार कसले पाएका थिए?
२०१७ – जेफ्री हल, माइकल रोस्ब्याश र माइकल यङ्। शरीरले कसरी सर्केडियन रिदम अर्थात् ‘जैविक घडी’ कायम राख्छ भन्ने अनुसन्धानका लागि
२०१६ – योशिनोरी ओहसुमी। विकार पुनर्प्रयोग गरेर कोषहरू कसरी स्वस्थ रहन्छन् भनेर पत्ता लगाउने अनुसन्धानका लागि
२०१५ – विलियम सी क्याम्पबेल, सातोशी ओमुरा र यूयू टू। परजीवी नियन्त्रण गर्ने औषधिका लागि
२०१४: जन ओ’कीफ, मे-ब्रिट मोजर र एड्वार्ड मोजर। मस्तिष्कको परिगमन प्रणाली पत्ता लगाउने अनुसन्धानका लागि
२०१३ – जेम्स रथ्म्यान, र्‍यान्डी शेक्म्यान र थोमास स्युड्होफ। कोषले कसरी पदार्थहरू परिवहन गर्छन् भने अनुसन्धानका लागि
२०१२: जन गर्डन र शिन्या यामानाका। कोषलाई स्टेम सेल बनाउन सफल भएकोमा
काठमाडाैं, ७ असोज । यदि तपाई कुनै नोकरीमा आवद्ध हुनुहुन्छ भने तपाईको काम गर्ने क्षमता दुई गुणाले वृद्धि भएर जान्छ जब तपाईको कार्यालय प्रमुखले तपाईसँग राम्रो व्यवहार गर्छ। क्वार्टर म्यागेजिनमा प्रकाशित एक अनुसन्धानले अमेरिकाका करिव ७५ प्रतिशत कामदारहरुको डिप्रेसनको मुख्य कारण उनीहरुको हाकिम भएको खुलासा भएको छ। हावर्ड विजनेश स्कुल र स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका शोधकर्ताहरुले गरेको २ सय भन्दा बढी अध्ययनले कामका क्रममा लिइने तनावले स्वास्थ्यलाई नकारात्मक असर पुर्याउने र यो चुरोट भन्दा बढी हानिकारक हुने देखाएको हो। तनावको मुख्य कारण भने खराब प्रवृत्तिको हाकिम रहेको छ।
अनुसन्धानमा भनिएको छ की ‘खराब प्रवृत्तिको हाकिमले चुरोट भन्दा बढी हानी गर्छ, तपाई जती दवाव दिइराख्ने हाकिमसँग बसेर काम गर्नुहुन्छ त्यती तपाईको शारिरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा नकरात्मक असर पर्छ।’ यस्तै केहि कर्मचारिहरु आफुले गर्दै आएको नोकरी जान्छ की भन्ने पिरले समेत तनावमा रहने गरेका अध्ययनले सार्वजनिक गरेको छ। अध्ययनले भनेको छ ‘तपाईको हाकिम राम्रो छ हरेक कुरामा सघाउँछ तपाईसँग सकारात्मक व्यवहार प्रदर्शन गर्छ भने तपाई हरेक काममा सफल बन्न सक्नुहुन्छ तर खराब छ भने तपाईको भविष्यनै खतरामा पर्न सक्छ।’
नराम्राे प्रवृत्तिको हाकिम सधै रिसालु र हिंस्रक हुने जसले सधै ‘मैले यस्तो गरेको त्यस्तो गरेको तिमीहरु यत्ति काम पनि गर्न नसक्ने’ भन्दै झर्कने ‘तिमीहरुसँग अहिले सम्म नोकरी छ आफुलाई भाग्यमानी ठान’ भन्ने तथा ‘एकछिन समेत म यहाँ भएन भने तिमीहरुले सम्पुर्ण कुरा विगार्छौ’ भन्दै कर्मचारीसँग झर्कने गरेका अनुसन्धानमा उल्लेख छ।
साभार नागरिक न्युज
अभिभावकले गरेको धुम्रपानले छोराछोरीमा गम्भीर असर
भाद्र ४, बिबिसि। एउटा अमेरिकी अनुसन्धानका अनुसार धूम्रपान गर्ने बाबुआमासँग हुर्किएका चुरोट नपिउने छोराछोरी वयस्क अवस्थामा पुगेपछि उनीहरूमा फोक्सोसम्बन्धी गम्भीर रोगका कारण मृत्यु हुने जोखिम उच्च छ।
हरेक वर्ष प्रत्येक एक लाखको दरले धूम्रपान नगर्ने वयस्कहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन् र बाल्यकालमा हुने ‘प्यासिभ स्मोकिङ’ अर्थात् चुरोट पिउने मानिसहरूको वरपर रहेर हुर्किएमा त्यसले सो संख्यामा ‘थप सातजनाको मृत्यु’ पनि थपिदिने अनुसन्धानकर्ताहरू बताउँछन्।
अमेरिकी क्यान्सर सोसाइटीले ७० हजार ९०० चुरोट नपिउने पुरुष तथा महिलामा गरिएको अध्ययनको नेतृत्व गरेको थियो।
विज्ञहरू भन्छन्- बालबालिकालाई जोगाउने सबैभन्दा उत्तम तरिका भनेको धूम्रपान त्याग्नु हो।
वयस्क अवस्थामा धूम्रपान गर्नेसँग बसेका सहभागीहरूमा स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्य समस्याहरू पनि देखिएको सो अध्धयनले पत्ता लगाएको छ।
प्रत्येक हप्ता १० वा त्योभन्दा धेरै घण्टा चुरोटको धुवाँको सम्पर्कमा आएमा त्यसले ‘इस्कीमिक मुटु रोग’ का कारण ज्यान जाने जोखिम २७ प्रतिशतले बढ्छ।
‘इस्कीमिक मुटु रोग’ लाग्दा मुटुको धमनी साँघुरो भई रगत वा अक्सिजन कम प्रवाह हुनसक्ने अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै चुरोट नपिउनेभन्दा चुरोट पिउनेहरू माझ हुर्किएका वयस्कमा मस्तिष्कघातका कारण २७ प्रतिशत तथा दीर्घकालीन श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगका कारण मृत्यु हुने जोखिम ४२ प्रतिशत रहेको उक्त अध्ध्यनले देखाएको छ।
‘अमेरिकन जर्नल अफ प्रिभेन्टिभ मेडिसिन’मा उक्त अध्धयन प्रकाशित छ।
अध्ययनका क्रममा सहभागीहरूलाई उनीहरू जीवनभर चुरोटको धुवाँको कत्तिको सम्पर्कमा रहे भनेर प्रश्न गरिएको थियो र त्यसपछि अर्को २२ वर्षसम्म उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्थालाई निगरानीमा राखिएको थियो।
एक्सन अन स्मोकिङ एण्ड हेल्थ नामक अभियान समूहकी हेजल चिजम्यानले भनिन्, “बालबालिकालाई जोगाउन उनीहरूको सम्पर्कभन्दा बाहिर रहेर चुरोट पिउनु पर्ने पछिल्लो अध्धयनले देखाएको छ। सबैभन्दा सही तरिका भनेको आमाबाबुले चुरोट पिउन नै छाड्नु हो।”
ब्रिटिश लङ फाउण्डेशनका स्वास्थ्य सल्लाहकार डाक्टर निक होपकिनसनले ‘प्यासिभ स्मोकिङ’ को बाल्यकालपछि सम्म पनि एकदमै गहिरो असर हुने बताए।
चुरोट पिउने आमाबाबुका छोराछोरी दम तथा फोक्सो राम्रोसँग विकास नहुने समस्याको जोखिममा हुन्छन्। सो अध्ययनले बाल्यकालमा चुरोटको धुवाँको सम्पर्कमा रहे त्यसको असर वयस्क अवस्थासम्म रहने जसकारण श्वासप्रश्वाससम्बन्धी दीर्घकालीन रोग लाग्ने देखाएको छ।
सो अनुसन्धानका एकजना लेखक डाक्टर रायन डाइभरले भने, “प्यासिभ स्मोकिङसँग बाल्यकालमा हुने सम्पर्क तथा अधबैँसे अवस्था र त्यसपछि कडा खालको फोक्सोसम्बन्धी रोगका कारण मृत्यु हुने सम्बन्ध देखाउने यो पहिलो अध्ययन हो।”
उनले भने, “हाम्रो खोजले जीवनभर ‘प्यासिभ स्मोकिङसँग हुने सम्पर्क घटाउन थप प्रमाण दिन्छ।”